RW C/WELI: "Soomaalidu waa in ay Caawiyaan Walaalahooda Dhibaateysan" | Sagal Radio Services
Mudane C/weli Sheekh ayaa ku booriyay dadka Soomaaliyeed ee wax haysta iyo kuwa qurbaha jira inay la yimaadaan karti iyo door ku aaddan sidii ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen xal u helidda macaluusha iyo abaarta ka jira qaybo ka mid ah gobollada dalka.
“Waxaa murugo leh in dalkeenna iyo dadkeenna markii la joogo dhawr sano ay abaar iyo biyo la’aani ku habsato. Waa murugo sannad walba in caalamka laga daawado hooyooyin iyo carruur Soomaaliyeed oo gaajo la il-daran ama u dhimanaya. Walaalleyaal, hadaan la sugno bulshadeena gargaar shisheeye waxaa dhici karta in dhibku intaan kasii darnaado, waxaa lagama maarmaan ah inaan fahamno, garawsanno una istaagno, inaan isku tashanno oo aan ka maaranno gar-gaar shisheeye,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan sidii ay gurmad deg-deg ah ugu fidin lahaayeen dadkooda dhibaateysan, isla markaana aysan ku halayn gurmad ka yimaada caalamka.
“Ma waxaan awoodi waynay inaan isku aragti ka noqonno isku meelna uga soo wada jeesanno sidaan ummaddeenna jahliga, baahida, biyo la’aanta, baryada iyo gacan hoorsiga caalamka uga maarmi lahayn, taasoo ah mid dhaawacaysa sharafteena iyo qarannimadeena. Waxaan si gaar ah ula hadlayaa maanta qurbe-joogta Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo inta wax haysata inaad xil-gaar ah iska saartaan sidii aad u caawin lahaydeen dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ku habsatay, nolol xumada iyo murugadana la il-daran,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Isagoo sii hadlaya ayuu yiri. “Ha sugina inta ay dhacayso dhimasho la mid ah tii dhacday sannadkii 2011-kii. Taasoo markii aad ka aragteen geerrida dhacaysa shaashadaha caalamka aad u soo gurmateen, ha sugin hana ku fakarin in gacan shisheeye ay keento gurmad deg-deg ah, Adduun iyo aakhiraba waxaad sharaf ku leedihiin inaad walaalihiin u soo gurmataan… inaad dhallaanka, hooyooyinka iyo odayaasha Soomaaliyeed maanta iyo maalin kaleba ka badbaadisaan dhibaatooyinka is kaashaday.”
Ugu danbeyn ra’iisul wasaaruhu wuxuu hadalkiisa kusoo xiray. “Waxaan si xushmad iyo sharafba xambaarsan idin kaga codsanayaa inaad walaalihiin si hufnaan iyo geesinimo leh ugu soo gurmataan maanta.”
Hadalka ra’iisul wasaaraha ayaa kusoo beegmaya iyadoo deegaanno badan oo ka tirsan gobollada dalka ay ka jiraan abaaro ay dad u dhinteen, iyadoo aysan jirin weli gurmad caalamka ka yimid.